အောက်တိုဘာလ 2015 |2၏စာမျက်နှာ 19 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » အောက်တိုဘာလ (စာမျက်နှာ 2)
လစဉ်မော်ကွန်း: အောက်တိုဘာလ 2015
3th AES ကွန်ဗင်းရှင်းမှာ RTW ဟန်ပြနယူး TM139 ကို USB Connect ကို Tool ကို
နယူးယောက်, အောက်တိုဘာ 29, 2015 - RTW, အမြင်အာရုံအသံမီတာတစ်ဦးဦးဆောင်ရောင်းချသူနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်, ထုတ်လုပ်ခြင်း, post ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများအတွက် devices တွေကိုစောင့်ကြည့်, နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ 3th AES ကွန်ဗင်းရှင်းမှာ၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က TM139 ကို USB Connect ကို Tool ကိုပြပါလိမ့်မည် (avid Pavilion Booth 719) ။ ဤသည်အစီအစဉ်သစ်မှ features အသစ်များကို RTW ရဲ့လူသိများတဲ့ Masterclass plug-ins များကိုတိုးမြှင့ ...
Tiffen Cameraimage မှာရုပ်ရှင်ပွဲပူးပေါင်းမည် - Garrett ဘရောင်းကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် Image ကိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ Moving
အဆိုပါ 14st 21 x ကို2dpi ဓာတ်ပုံများမှနိုဝင်ဘာလ 300th ထံမှ Bydgoszcz အတွက်ပိုလန်အတွက် Cameraimage ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်ကြည့်ရှု Tiffen အင်တာနေရှင်နယ်သည် Tiffen နိုင်ငံတကာစာနယ်ဇင်းကြေညာချက် Tiffen Cameraimage မှာရုပ်ရှင်ပွဲပူးပေါင်းမည်နောက်ဆုံးပေါ် Tiffen filter ကိုထုတ်ကုန်ဖေါ်ပြခြင်းပူးတွဲ - Garrett ဘရောင်းကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် Moving image ကိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ Pinewood Studios က, လန်ဒန်ဗြိတိန်, 29th အောက်တိုဘာလ 2015: Tiffen နိုင်ငံတကာ ...
POLECAM မှာအသုံးပွုတဲ့ PICO Ultra နှေးပြကွက်ကင်မရာများအသုံးပြု FOR တင်ပြ SPORTS Awards
POLECAM လန်ဒန်ဗြိတိန်, 2th အောက်တိုဘာလမှာအသုံးပွုတဲ့ PICO Ultra နှေးပြကွက်ကင်မရာများအသုံးပြု FOR ပေးအပ်သည့် onboard ဘမ်းမိသောစိုင် PICO က Ultra ရွေ့လျားမှု minicam SPORTS Award နှင့်အတူဘာကူ, အဇာဘိုင်ဂျန်မှာအသုံးပြုမှုအတွက် Polecam ဖေါ်ပြခြင်းပူးတွဲချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် 300 x ကို 29 dpi ဓာတ်ပုံများသည် Polecam စာနယ်ဇင်းကြေညာချက် 2015: အဆိုပါနှစ်ပတ်လည် Sportel ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကြေညာဖို့မိုနာကိုအတွက်မကြာသေးမီကဖြစ်ပျက် ...
DPA မိုက်ခရိုဖုန်းမိတ်ဆက်နယူးဃ: screet ™လင်းမ်သည် AES 2015 မှာ
AES 29 (Booth 2015) မှာ screet ™လင်းမ်သည်မိုက်ကရိုဖုန်း: - New York, အောကျတိုဘာ 2015, 727 DPA မိုက်ခရိုဖုန်းက၎င်း၏အသစ်သောဃကြေညာဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ တစ်မြို့အနီး-မမြင်ရတဲ့ bodyworn မိုက်ခရိုဖုန်းအဘို့, အထူးသဖြင့်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းကနေတစ်ကြီးထွားလာလိုအပ်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, d: screet ™လင်းမ်ကုမ္ပဏီ၏တစ်ပြားချပ်ချပ်ဦးခေါင်း၌ omnidirectional ဆေးတောင့်ဒြပ်စင်တစ်ခုသွယ်ကေဘယ်လ်နှင့်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုခလုတ်ကို-ပေါက် mount ပါရှိပါတယ်။ ..
CCW 2015 ကုန်ပစ္စည်းကို Preview မှာ Riedel ဆက်သွယ်ရေး
CCW 2015 နိုဝင်ဘာ 11-12 မှာ Riedel ကုန်ပစ္စည်းများ 1043 MediorNet Micron Micron ရပ်မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်၏ Riedel ရဲ့ MediorNet လိုင်းတစ်ခု 80, G မီဒီယာဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုကိရိယာဖြစ်သည်။ အဆိုပါ MediorNet MetroN core ကိုဖိုင်ဘာ router ကိုအတူချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်, Micron အသံ, ဗီဒီယို, နှင့် 24 SD က / HD ကို / 3G-SDI အပါအဝင် data တွေကိုသွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များ, တစ်ဦးပြည့်စုံခင်းကျင်းနှင့်အတူ High-density ကို signal ကိုအင်တာဖေ့စသည် ...
Macnica အမေရိကနှင့် intoPIX အဆိုပါ SMPTE4နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲမှာ RTP သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် TICO Lite ချုံ့သုံးပြီး IP ကိုကျော် UHD2015K တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအသစ်တစ်ခု FPGA ရည်ညွှန်းဒီဇိုင်းကိုဆောင်ကြဉ်း
တစ်ဦး Altera FPGA အပေါ် running အသစ်ဒီဇိုင်းကိုအနိမ့်အောင်းနေချိန်ရရှိ, 4GbEthernet ကွန်ယက်ကိုကျော်အမြင်အာရုံ Lossless UHD10K သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Macnica အမေရိကတိုက်, IP ကိုဖြေရှင်းချက်ကျော်ကဗီဒီယိုတစ်ဦးဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း infrastructures နှင့် intoPIX, compression နည်းပညာများတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, သယ်ဆောင်ရန်ဒီဇိုင်းသစ်တစ်ခု FPGA ဖြေရှင်းချက်သရုပ်ပြ စတူဒီယိုအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် IP ကိုကျော် UHD4K, အ SMPTE 2015 မှာ RTP ကျော် TICO ပေါ့ပါးတဲ့ compression သုံးပြီး ...
intoPIX အဆိုပါ SMPTE 2015 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲမှာ TICO ပေါ့ပါးတဲ့ compression ကို အသုံးပြု. UHDTV Hybrid ကို SDI / IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါတင်ဆက်ပေးတယ်
အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲ Semtech, Xilinx ထံမှ UHDTV စပ်အခြေခံအဆောက်အအုံနည်းပညာလည်းပါဝင်သည်, တီဗီ-Logic နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသော intoPIX, FPGA, ASIC နှင့် software များအတွက်ဗွီဒီယိုချုံ့နည်းပညာများ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး, တစ်ဦးကိုနောက်ကျော် Ultra-high definition ဗီဒီယိုကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်၎င်း၏ TICO ပေါ့ပါးတဲ့ compression ၏အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါသရုပ်ပြ Semtech, Xilinx, TVLogic နှင့်ယခုနှစ် SMPTE 2015 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံမှာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောထံမှအဆင့်မြင့်နည်းပညာ featuring -generation UHDTV စပ် SDI / IP ကိုအခြေခံအဆောက်အဦ ...
SMPTE4မှာဆိုနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုစနစ်များစျေးသစ် 2015K FMC ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Module: Commoditizing ဗီဒီယို-ကျော်-IP ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
အယ်လ်ဒိုရာဒိုကုန်း, CA ၏ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုစနစ်ယခုနှစ် SMPTE 2015 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံနှင့်ပြပွဲမှာ၎င်း၏အသစ်အ VIDIO FMC ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Module ရဲ့စွမ်းရည်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယို 4k နှင့်ဗီဒီယို-over-IP ကိုမှအကူးအပြောင်းဖြေလျှော့ဖို့ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူထုတ်လွှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖြေရှင်းချက်နဲ့ Intellectual Property (IP) cores ပေးအထူးပြု။ အဆိုပါဆန်းသစ်သောအစွမ်းထက်နှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပလက်ဖောင်း (VIDIO FMC ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Module) ...
2 ၏စာမျက်နှာ 19«12345 » 10...နောက်ဆုံး»